Dzidza nezvema 23 Cal State Universities
Dzidza Nezvezvikoro 23 Zvinogadzira California State University System
Chikamu cheCalifornia State University chirongwa chakaitwa nemasunivhesiti makumi maviri nemasere . Nevadzidzi vanopfuura 400 000, ndiyo ndiyo yakakura yevashandi vegore mana munyika. Nhengo dzemayunivhesiti anosiyana zvakakura muhukuru, simba rekudzidza uye kusarudza. Iva nechokwadi chekutora zita rechikoro kuti udzidze zvakawanda nezveyunivhesiti uye zvinotora kuti zvigamuchirwe.
Uyewo ona zvinyorwa izvi:
SAT Kuenzanisa Chati yeKal State
ACT Kufananidza Chati yeKal State
Cal State Bakersfield iri pane 375-acre campus muSan Joaquin Valley, pakati peFresno neLos Angeles. Yunivhesiti inopa mapurogiramu makumi maviri nemasere epurogiramu uye mapurogiramu echikoro gumi nemakumi mashanu. Pakati pevashandi vepasi, mabhizimisi ekutengeserana uye hurumende dzakasununguka uye nesayenzi ndiyo inonyanya kufarira majors.
Nzvimbo: Bakersfield, California
Kunyoresa: 9,341 (8,179 pasi pedduates)
Kubvumwa: GPA, SAT chikamu uye ACT chikamu chemafu
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga Cal State Bakersfield purogiramu .
I Bell Bell pa CSUCI, Cal State University Channel Islands. Stephen Schafer / Wikimedia Commons
CSUCI, California State University, Channel Islands, yakatangwa muna 2002 uye ndiyo inonyanya kudarika yemayunivhesiti 23 muCal State system. Yunivhesiti iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweLos Angeles. Pakati pemabhiza makumi maviri, mabhizinesi, masayendisiti ezvesuzhinji uye liberal arts vanozivikanwa zvakaenzana pakati pevanodzidza pasi. Chikoro cheCUCUCI chinonyanya kusimbisa ruzivo rwehupenyu nehutano.
Nzvimbo: Camarillo, California
Kunyoresa: 6 611 (6 355 undergraduates)
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga purogiramu yeCUCUC .
Munyika yepamusoro, Chico inowanzoonekwa pakati peyunivhesiti yepamusoro yemayunivhesiti muWest. Chokutanga chakavhurwa muna 1889, State Chico ndiyo yechipiri kudarika yeCal State universities. Chico State inopa mapurogiramu anopfuura 150 pasi-degree. Kubudirira kugona vadzidzi kunofanira kutarisa muChico State Honors Program yekusvika kumakoro maduku nezvimwe zvinhu.
Nzvimbo: Chico, California
Kunyoresa: 17,557 (16 471 pasi pedduates)
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga chimiro cheChico State .
StubHub Centre ku CSUDH. Photo Credit: Marisa Benjamin
Cal State Dominguez Hills '346-acre campus inogara mumaminitsi emuguta reMoscow nePacific Ocean. Chikoro chinopa mapurogiramu makumi mashanu ezvidzidzo; bhizimisi rehutungamiri, dzidzo yehupfumi uye vanamukoti ndiyo inonyanya kufarira majors pakati pevadzidzi vepasi. Vadzidzi ve CSUDH vanomiririra nyika 90. Vafambi vemitambo vanofanira kuona kuti Home Depot Center iri pamusasa.
Nzvimbo: Carson, California
Kunyoresa: 14 731 (12 685 pasi pedduduates)
Ongorora Campus: CSUDH Photo Tour
Kuti uwane dhepfenyuro pamusoro pemari, mari yekubatsira, mutengo wokugamuchira uye zvakawanda, verenga mufananidzo weCal State Dominguez Hills .
Cal State campus main campus iri muHayward Hills ine maonero anoshamisa eSan Francisco Bay. Yunivhesiti inopa 49 chiremba uye makumi maviri nemazana mapurogiramu epurogiramu. Pakati pevachengeti vepaduku, mabhizinesi ekutengeserana ndiyo inonyanya kuzivikanwa zvikuru. Yunivhesiti yakawana kukoshesa kwenyika kubudirira kwayo uye iyo Freshman Kudzidza Makomba.
Nzvimbo: Hayward, California
Kunyoresa: 15 855 (13 407 pasi pedduduates)
Kuti uwane data pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga Cal State East Bay profile .
Fresno State ine nzvimbo yakakura ye 388-acre pamusana pezvikomo zveSierra Nevada nechepakati pekatikati peLos Angeles neSan Francisco. Fresno State inoremekedzwa zvikuru Chikoro chebhizimisi cheCraig chinonyanya kufanana pakati pevadzidzi, uye bhizimisi rehutongi ine chikamu chepamusoro chekunyora pasi kwepamusoro-soro kwevose vakakura. Kubudirira kupedza vadzidzi kunofanira kutarisa muSmittcamp Honors College iyo inopa dzidzo yekudzidzira chidzidzo, nzvimbo uye bhodhi.
Nzvimbo: Fresno, California
Kunyoresa: 24 405 (21,530 pasi pedduates)
Kuti uwane data pamusoro pemari, mari yekubatsira, mari yekugamuchira uye nezvimwe, verenga Fresno State profile .
Student Recreation Centre paCUSU, California State University Fullerton. Photo Credit: Marisa Benjamin
Cal State Fullerton ndeimwe yemayunivesiti makuru muCalifornia State University system. Chikoro ichi chinopa zvikoro zvechikoro makumi mashanu nemakumi mashanu uye mapurogiramu makumi mashanu. Bhizinesi ndiyo chirongwa chinonyanya kuzivikanwa pakati pevadzidzi vepasi. Yunivhesiti ye 236-acre campus iri muLisland Country pedyo neLos Angeles.
Nzvimbo: Fullerton, California
Kunyoresa: 40 235 (34,576 pasi pedduates)
Ongorora Campus: CSUF Photo Tour
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga purogiramu yeCal State Fullerton .
Humboldt State University ndeyekuchamhembe kwezvikoro zveCal State, uye inogara pedyo nemusango we redwood uye inotarisa Pacific Ocean. Vadzidzi vane ruzivo rwekufamba-famba, kushambira, kayaking, musasa nemamwe mabasa kunze kwemukona uyu wakakosha weCentral California. Yunivhesiti inopa zvidzidzo zvayo zvechikoro chechikoro chechikoro chepamusoro 47
Nzvimbo: Arcata, California
Kunyoresa: 8 503 (7 982 pasi pedduates)
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga Humboldt State profile .
Kudzikadzidza Kwevadzidzi uye Wellness Centre pa CSULB. Photo Credit: Marisa Benjamin
Cal State Long Beach yakakura kuva imwe yunivhesiti yakakura muScreen system. Iyo 323 acre campus iri muLos Angeles Country uye inofadza kunakisa nzvimbo uye imwe yepiramidi yakafanana nemitambo yakaoma. CSULB inowanzotora zvikwangwani zvakakosha zvekukosha kwayo, uye yunivhesiti yakapiwa chitsauko chePhi Beta Kappa nokuda kwesimba rayo mune zvigadzirwa zvehupfumi uye sciences. Bhizimisi rehupfumi ndiyo inonyanya kuzivikanwa pakati pevadzidzi vepasi.
Nzvimbo: Long Beach, California
Kunyoresa: 37 776 (32.345 pasi pedduates)
Ongorora Campus: CSULB Photo Tour
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga nhoroondo ye CSULB .
Cal State Los Angeles iri muYunivhesiti yemunharaunda yeLA Yunivhesiti inopa 59 pasigraduate zvirongwa zvinotungamirira kuchikoro chechikoro chechikoro, uye 51 mapurogiramu emitemo yechikoro. Pakati pevashandi vepasi, mapurogiramu ekugadzirisa zvemabhizimisi, dzidzo, kururamisira kwemhosva uye basa rekugarisana ndiyo inonyanyozivikanwa.
Nzvimbo: Los Angeles, California
Kunyoresa: 27 827 (24 074 pasi pedduduates)
Ongorora Campus: CSULA Photo Tour
Kuti uwane data pamusoro pezvinodhura, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga faira re CSULA .
Cal Maritime ndiyo yega dhigirii-kupa maritime academy kuWest Coast. Dzidzo inobatanidza tsika yeklasi yekudzidziswa neunyanzvi hwekudzidzira uye kudzidza zvidzidzo. Chimwe chinhu chinoshamisa chekudzidzisa kweCal Maritime mwedzi miviri yekudzidzira mhirizhonga kune imwe yunivhesiti, Golden Bear. Chikoro chiduku uye chinonyanya kuzivikanwa cheCal State system.
Nzvimbo: Vallejo, California
Kunyoresa: 1,107 (yose undergraduate)
Kuti uwane deta pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga Cal Maritime profile .
Yakatangwa muna 1994, California State University paMonterey Bay ndiyo yechikoro chechidiki zvikuru muCal State system. Chikoro chinoshamisa chekugadzikana kwegungwa ndechekudhonza kukuru. Chiitiko cheCUMBUMBU chinotanga nemusangano wegore rokutanga uye chinopedzisa nemushandi wepamusoro wekona. Yunivhesiti ine zvikepe zviviri zvekutsvakurudza zvekudzidza Monterey Bay, uye ruzivo rwebasa uye ruzivo rwepasikiriyamu mapurogiramu anozivikanwa.
Nzvimbo: Gungwa, California
Kunyoresa: 7 274 (6 758 undergraduates)
Kuti uwane data pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga chimiro cheSUMBUMBUTE .
Cal State Northridge 365-acre campus iri muLos Angeles 'San Fernando Valley. Yunivhesiti inoumbwa nemakoroji mapfumbamwe anopa zvikamu makumi matanhatu nemakumi matanhatu nemapurogiramu echikoro. Kurairwa kwebhizimisi uye psychology ndiyo inonyanya kufarira majors pakati peCASU pasi pedduduates. Yunivhesiti yakagamuchira zvikwiriso zvepamusoro pamarongwa ayo mumimhanzi, inyanzvi uye bhizinesi.
Nzvimbo: Northridge, California
Kunyoresa: 39 916 (35 756 pasi pedduates)
Kuti uwane deta pamusoro pezvinodhura, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga Cal State Northridge purogiramu .
Cal Poly Pomona Library Inopinda. Victorrocha / Wikimedia Commons
Cal Poly Pomona ya1438-acre campus inogara kumabvazuva kweLos Angeles Country. Yunivhesiti inoumbwa nemakoroji masere ezvidzidzo nebhizimisi ndiyo inoratidzirwa purogiramu pakati pevanodzidza pasi. Nhungamiro yeCal Poly yekudzidzira ndeyekuti vadzidzi vanodzidza nekuita, uye yunivhesiti inokurudzira kugadzirisa zvinetso, kutsvakurudza kwevadzidzi, kudzidzira uye kudzidza kwebasa. Nekiki ne 280 makambani nemasangano, vadzidzi paCal Poly vanobatanidzwa zvikuru mumusasa wekampus.
Nzvimbo: Pomona, California
Kunyoresa: 25 316 (23.733 pasi pedduates)
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga Cal Poly Pomona profile .
Sacramento State University Sign (diya mufananidzo kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Sacramento State inodada mumutauro wayo wevanhu vakawanda. Chikoro chemakiromita 300 chechikoro chinopa vadzidzi nyore kuwana nzira dziri pedyo neAmerica River Parkway pamwe neFolsom Lake uye Old Sacramento dzekuvaraidza. Yunivhesiti inopa 60 mapurogiramu epadheyate degree. Kubudirira kupedza vadzidzi kunofanira kutarisa muChipatimendi cheHurumende Honors Program.
Nzvimbo: Sacramento, California
Kunyoresa: 30,510 (27 951 vasiri pasi pekudzidza)
Ongorora Campus: Sac State Photo Tour
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga chidimbu cheSadramento State .
The College of Education kuCUSUSB, California State University San Bernardino. Amerique / Wikimedia Commons
Cal State San Bernardino inopa mabhiriyoni makumi manomwe nemakumi mapfumbamwe emapurogiramu ekugadzirwa kwebhizimisi ndiyo inonyanya kuzivikanwa pakati pevadzidzi vepasi. Yunivhesiti inozvidzivirira pane zvakasiyana-siyana zvemuviri wevadzidzi uye kuti hapana huwandu hwemarudzi eboka pamusasa.
Nzvimbo: San Bernardino, California
Kunyoresa: 20 767 (18 476 pasi pedduates)
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga Cal State San Bernardino profile .
San Diego State University inobatsira zvikuru kudzidza kune dzimwe nyika - Vadzidzi veSADSU vane sarudzo yekudzidza 190 kune dzimwe nyika mapurogiramu. Yunivhesiti ine chiitiko chechiGiriki chinoshingaira uye chinopfuura makumi mashanu ehurumende uye hutsinye. Kutungamira kwebhizimisi ndiyo inonyanya kuzivikanwa zvikuru kuDSSU, asi simba rechikoro mune hupfumi uye masayenzi rakagamuchira chitsauko chekodzero yeP Phi Beta Kappa .
Nzvimbo: San Diego, California
Kunyoresa: 34 688 (29 860 pasi pedduates)
Ongorora Campus: SDSU Photo Tour
Kuti uwane ruzivo pamusoro pezvinodhura, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga sani reSan Diego State University .
Sani Francisco State University inodada mukusiyana-siyana kwemuumbi wevadzidzi - 67% yevadzidzi vepashure ndivo vadzidzi vevara, uye vadzidzi vanobva kunyika 94. Chikoro chinonyora vadzidzi vakawanda vemarudzi akawanda kune imwe yedzipi yedzidzo yegenzi-kupa yunivhesiti munyika. Sani Francisco State inopa 115 mapurogiramu ezvidzidzo zvechidimbu uye mapurogiramu makumi mashanu.
Nzvimbo: San Francisco, California
Kunyoresa: 29,045 (25 945 pasi pedduates)
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwewo, verenga sangano reSan Francisco State .
San Jose State State
San Jose State University ye 154-acre campus inowanikwa mumaguta makumi mana eguta reguta reSan Jose. Yunivhesiti inopa bhizinesi uye zvidzidzo zvedhigiri mumasimi 134. Bhizimisi rehurumende ndiyo inonyanyozivikanwa zvikuru pakati pevadzidzi vekudzidza, asi yunivhesiti ine mamwe akawanda mapurogiramu akasimba anosanganisira zvidzidzo zvekutsvaga, unyanzvi uye unyanzvi.
Nzvimbo: San Jose, California
Kunyoresa: 32 154 (26 432 pasi pedduates)
Kuti uwane data pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga nhoroondo yeSan Jose State .
Centre for Science uye Mathematics paCal Poly San Luis Obispo. John Loo / Flickr
Cal Poly, yeCalifornia Polytechnic Institute kuSan Luis Obispo, inogara ichitaridzirwa seimwe yezvikoro zvepamusoro nesayenzi uye zvikoro pachikoro chepascheduate. Zvidzidzo zvaro zvekuvakwa uye zvekurima zvinowanikwawo zvakanyanya. Cal Poly ine "dzidza nokuita" uzivi wezvedzidzo, uye vadzidzi vanoita izvozvi pane imwe nzvimbo yakaderera yemasikari anenge 10 000 anosanganisira munda weminda uye munda wemizambiringa.
Nzvimbo: San Luis Obispo, California
Kunyoresa: 21 306 (20426 pasi pedduates)
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kubvuma kutengesa uye nezvimwe, verenga Cal Poly profile .
Yakasimbiswa muna 1989, Cal State San Marcos ndiyo imwe yezvikoro zviduku muCal State system. Yunivhesiti inopa pasi pedduates kusarudzwa kwezvirongwa makumi mana nemasere mune zvidzidzo, vanhu, sciences social, sciences uye mashizha eminda. Bhizimisi rehurumende ndiyo inonyanyozivikanwa zvikuru pakati pevashandi vepasi padzidzo apo dzidzo ndiyo purogiramu yakakurisa tenzi.
Nzvimbo: San Marcos, California
Kunyoresa: 13 144 (12,567 pasi pedduates)
Kuti uwane deta pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga Cal State San Marcos profile .
Sonoma State University ye 269-acre campus iri makiromita makumi mashanu kuchamhembe kweSan Francisco mune imwe nyika yeCalifornia yakanakisisa yewaini. Chikoro chinewo maitiro maviri anochengetedza izvo zvinopa mikana yekutsvakurudza yevadzidzi muzvidzidzo zvepanyama. Zvikoro zveStuoma State zveBhizinesi neHumanities, Bhizinesi uye Economics, uye Social Sciences zvose zvakakurumbira pakati pevadzidzi vekudzidza.
Nzvimbo: Rohnert Park, California
Kunyoresa: 9 313 (8 631 pasi pedduates)
Kuti uwane data pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga sangano reSaoma State .
CSU Stanislaus iri muSan Joaquin Valley kumabvazuva kweSan Jose. Yunivhesiti yave ichizivikanwa nezvekukosha kwayo, unyanzvi hwepamusoro, hutano hwemagariro evanhu uye miitiro yakaoma. Pakati pevadzidzi vepasi, mabhizimisi ekutungamira ndiyo inonyanyozivikanwa zvikuru. Iko 228-acre park-like campus inoshandisa $ 16 mamiriyoni emitambo yevhidhiyo yevadzidzi.
Nzvimbo: Turlock, California
Kunyoresa: 9 762 (8 620 undergraduates)
Kuti uwane ruzivo pamusoro pemari, rubatsiro rwemari, kutambira kwehuwandu nezvimwe, verenga sarudzo yeScU Stanislaus .
OWEN - Surname Zita uye Mhuri Nhoroondo
Cuáles son las consécuencias de I-275 visa y ha hacer
Root uye Butt Rot Rot Tree Disease - Kudzivirira uye Kudzora
Garai neDallas Cowboys Cheerleaders
Chii chiri Hangdogging?
Zuva reGore Idzva, rakanyorwa naCharles Lamb
Zuva Rokuenzanirana revakadzi: Nhoroondo Pfupi
Mabhuku evana pamusoro paAbraham Lincoln
Ndeipi Chakavanzika cheNhau Dzose Inopindura? Kuwana Zvose Zvose.
Zvose pamusoro pemakomo ekumusoro-soro munyika
Prehistoric Dog Mifananidzo uye Nhoroondo
Fraction Worksheets and Printable
Chirongwa cheNational Conservativism
Nzira Yokuchenesa uye Kuchenesa Mvere Dzako neMatombo
Nzira Yokusarudza Nayo Yakanakisisa 2-Yakawedza Kubata Hove
Math Worksheets: Kutaurira Nguva kusvika Maminitsi 10, Maminitsi mashanu uye Imwe Minute
Marudzi Emafashamo Zviitiko Nezvikonzero Zvavo
Dzidza kuti Isita Ipi uye Sei VaKristu Vachiipemberera
Kuramba kweMisangano Yekuchengetedza Rugare muAfrica
Gemini uye Sagittarius Polarity
Chii chiri United States Refugee Act ye 1980?
Nhanganyaya kune Acrylic Mediums for Painting